December 9, 2020 - Khitalin Media
December 9, 2020 by Khitalin Media
ကောင်မလေးကလည်း အကြိမ်​ကြိမ်​ငြင်းဆို​နေတာ​ပေါ့ ! ”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယ်” ဘောစိ ဦးလေးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မတွေမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှင်း မည်ဖြစ်ကြောင်း နွားအို မြက်နုကြိုက်တာ အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထောက်၍ လက်ထပ်ခွင့်တောင်း​နေပြန်​တယ်​ ! ကောင်မလေးကလည်း “ငရဲတွေကြီးပါ့မယ် ဦးရယ်…မီးက တကယ် ခလေးရှိပါ သေးတယ်”ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုနေ​တော့… ဘောစိဦးလေးကြီးလည်း …“မီး​လေး​ရေ …ရှေ့ရေးစဉ်းစား​လေ” ..ဆိုပြီးအမြဲ နားပူနားစာလုပ်​​နေတယ်​ ! နောက်ဆုံးတော့ မီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလည်း ဘောစိဦးလေးကို….မငြင်းသာမလှုပ်သာပဲ လက်ထပ်ဖို့သဘောတူလိုက်​တယ် ! ကောင်မလေးက..ဦးနဲ့လက်ထပ်ပြီးရွာကို ခဏ ဆိုပြီးပြန်သွားတာပေါ့ !ဦးလည်း လွမ်းကာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်​ ! နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ ကောင်မလေး ဦးဆီကို ပြန်​ရောက်​လာတယ် ! ကောင်မလေး(ခေါ် )မီးရဲ့ ဘယ်ဘက်​လက်မှာ တစ်​နှစ်အရွယ် ခလေး​လေးတစ်ယောက် ချီပိုးပြီးပါလာတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘောစိဦးလေးကြီးကဘယ်သူလဲ … Read more
ဖူးစာဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဘယ်လောက်ရှာရှာ မတွေ့တတ်သလို၊ တစ်ခါတလေ မရှာပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်က ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုသိချင်နေတဲ့ သူတွအတွက် လအလိုက် ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံတတ်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1) January သင်ဟာ စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးသူပီပီ သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင်ဟာလည်း သင့်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ပြီး သင့်ကိုအမြဲတမ်း အားပေးကူညီတတ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်အနားမှာရှိနေပြီး သင့်ဖက်ကနေရပ်တည်ပေးတဲ့သူပါ။ (2) February သင်ဟာ အရမ်းပေါက်ကွဲလွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိစ္စတိုင်းကို လိုက်ပြီးခံစားတတ်တဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ဖူးစာရှင်ဟာ သင့်ရဲ့ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့စရိုက်ကို နားလည်သည်းခံပေးပြီး စိတ်ရှည်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (3) March သင်ဟာ အရမ်းကြင်နာသနားတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် ဘာမဆို ပေးဆပ်ဖို့ ဝန်လေးတတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ သင့်ဖူးစာရှင်ဟာလည်း … Read more
သံပုရာသီးစိမ်ထားတဲ့ရေကို အမြဲသောက်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
သံပုရာသီးဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေတဲ့ ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်လို့နေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူတွေဟာ ရိုးရိုးရေတောင်မဟုတ်တော့ဘဲ ရေထဲကို သံပုရာကွင်းလေးတွေ ထည့်ပြီးသောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုသောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးပြုစေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ (၁) ရေဓတ်ပိုပြည့်စေတယ် အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်ရေဓာတ် ၉၁ အောင်စလိုအပ်သလို အမျိုးသားတွေကတော့ ၁၂၅ အောင်စတောင် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရိုးရိုးရေသောက်မယ့်အစား အရသာနဲ့အနံ့ပါအောင် သံပုရာသီးလေးထည့်ပေးခြင်းဟာ ရေကိုပိုသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ရေဓာတ်လည်း ပိုပြည့်ဝစေပါတယ်တဲ့။ (၂) ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် စီ သံပုရာသီးမှာ ဗီတာမင် စီပါဝင်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိမှာပါ။ ဗီတာမင် စီ ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဗီတာမင် စီ ဟာ antioxidant ဓာတ်ပေါကြွယ်ဝတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက် သာမန်အအေးမိတာတွေအပြင် … Read more
ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေလို့ လုံးဝ မအိပ်စက်သင့်တဲ့ အချိန်အခါ (၃) ခု
လေ့လာချက်တွေအရ အိပ်တဲ့အချိန်နည်းလေ သေဆုံးဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများလေပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအဖို့ တစ်နေ့ ကို ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီအထိ အိပ်စက်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ အိပ်စက်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိလို့နေပါတယ် ။ ဒီလိုအချိန် (၃) မျိုးမှာအိပ်စက်မိရင်တော့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာစေလို့ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်နော်… (၁) ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန် အိပ်စက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ခံအားပိုရှိလာပြီး လူရော ၊ စိတ်ရော လန်းဆန်းစေတာပါ။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရမှာစိတ်မပါတဲ့အချိန်မှာ အတင်းအိပ်လိုက်ရတာမျိုး ၊ ဒေါသထွက်နေလို့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ထိုးအိပ်လိုက်တာမျိုးတော့ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာအိပ်လိုက်ရင် ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုစနစ်ကို နှောက်ယှက်လိုက်သလိုဖြစ်စေတာကြောင့် အိပ်ရေးဝပြီး လန်းဆန်းမလာစေပဲ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းကိုပါ ပျက်စီးစေပါတယ် ။ (၂) အရက် မူးနေတဲ့အချိန် အယူအဆအမှားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ … Read more
အစပ်လေးပါကာမှ ထမင်းစားဝင်တတ်တဲ့လူတွေ ရှိကြလားမသိဘူး။ တကယ်တော့ အစပ်စားခြင်းဟာ အစာအိမ်အတွက် မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့်လို့ ပုံမှန်လေးစားပေးခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းမထင်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ အသက်ရှည်စေတယ် Harvard and China National Center for Disease Control and PreventionTrusted Source ရဲ့ လေ့လာချက်အရ တစ်ပတ်ကို ၆ ရက်လောက် အစပ်ပါတာ စားပေးခြင်းဟာ မစားတဲ့လူတွေထက် အသက်ရှည်မှုနှုန်းဟာ ၁၄% လောက်ပိုမြင့်နေပါတယ်လို့ Health Line မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ Metabolism ကို မြှင့်တင်ပေးတယ် အစပ်နဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေဟာ သင့်ရဲ့ metabolism နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အစာလည်းခံစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစပ်ဟာ ဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာလည်း တော်တော်လေး … Read more
အစ်ကိုတွေနဲ့ အတူ ကြီးပြင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေသာ သိတဲ့ အကြောင်းအရာများ
ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေက သေချာ သိကြလေ့ မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုတွေနဲ့ ကြီးတဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိကြတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အစ်ကိုတွေများတဲ့သူတွေကတော့ တခြားမိန်းကလေးတွေ မသိနိုင်တဲ့ ဒီလို အကြောင်းအရာတွေကို သိနေတတ်ကြပါတယ်။ လိမ်တဲ့ အကွက်တွေ ကောင်လေးတွေကတော့ တကယ့်ကို လိမ်တာကို ကျွမ်းကျင်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်သူ ရည်းစား ကိစ္စတွေမှာ သူတို့တွေက လိမ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အိမ်မှာ မရှိဘဲ အိမ်မှာ ရှိတယ်လို့ လိမ်တာမျိုးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ ပုံစံတွေ၊ စတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ရှိနေတဲ့ လိမ်တတ်တဲ့ အချက်တွေကို အစ်ကိုရှိတဲ့ ကောင်မလေးတွေက သိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ့်ပုံစံအမှန် ကိုယ့်အစ်ကိုကို အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ ပုံစံတွေကိုရော၊ … Read more
မြင့်မြတ်ပြီး နှလုံးလှတဲ့ မိန်းကလေးမှန်း သိနိုင်မယ့် စရိုက်လက္ခဏာ (၅) မျိုး
ပုံပြင်တွေ၊ ရာဇဝင်တွေထဲကလို မြင့်မြတ်ပြီးနှလုံးလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အပြင်မှာ တကယ်ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနည်းငယ်ပါပဲ။ ရှားပါးတဲ့ တန်ဖိုးကြီးတွေလိုပဲပေါ့။ သင်ဟာ ဒီအချက်အားလုံးနဲ့ မကိုက်ညီရင်တောင် တော်တော်များများနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင် မြင့်မြတ်ပြီးနှလုံးလှတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ (၁) မနာလိုစိတ်မရှိဘူး လူတော်တေ်ာများများဟာ ကိုယ့်ထက်သာရင် မနာလိုတတ်တဲ့ စိတ်ရှိကြပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ မိန်းကလေးကတော့ သူတစ်ပါးကိုယ့်ထက်သာတာကို မြင်ရင် ရင်ထဲကနေ မုဒိတာပွားနေတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ကောင်းကွက်ကို ချီးကျူးဖို့ ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးတတ်သလို သူတစ်ပါးက ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မစိုးရိမ်ကြပါဘူး။ (၂) တာဝန်ယူစိတ်ရှိတယ် မြင့်မြတ်ပြီး နှလုံးလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ သံမဏိလိုပဲ ခိုင်မာပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့လုပ်တဲ့ အရာတိုင်းအတွက် တာဝန်ယူစိတ် အပြည့်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တာဝန်ယူထားတဲ့ … Read more
ကလော အင်းလေး ပင်းတရ ဘုရားဖူးသွားရင်… ရွာငံရေပြာအိုင်မရောက်ခင်လေးမှာ… မိန်းမရဲတောင်ရဲ့အလှ အပကိုစိတ်ဝင်စားလို့သွားကြဘုရားဖူးကြFacebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့နေရပေမယ့် အဲဒီတောင်ရဲ့ သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား . ကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို့ . . နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး ဘုရင့် သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့အချစ်ဆိုတာက ဆန်းကျယ်တယ်လေ သူချစ်မိတာကကျေးတောသား .ကုမ္မာရ တဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကိုဘုရင့် ရွေနားတော်ပေါက်ကြား အမျက်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်လား အမဲရိုးက ဟင်းအိုးကိုမှအားမနာ ကျေးတောသား ကုမ္မာရ လူငနွားကို သတ်စေတဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့် .ဒီသတင်း နန်းဧကရီမွှေးကြားတော့ ရင်ဝကို ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ အထုခံရသလို ထင်ပါရဲ … Read more
၂၀၂၀ဒီဇင်ဘာလ ရတနာပုံကိန်းဆိုက်သဖြင့် ထီပေါက်ကိန်းရှိသည့် တနင်္ဂနွေနှင့်အင်္ဂါသားသမီးများ ထီကံစမ်းရန်အချိန်
၂၀၂၀ဒီဇင်ဘာလတွင် တနင်္ဂနွေနှင့်အင်္ဂါသားသမီးများ ရတနာပုံကိန်းဆိုက်သဖြင့် ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ။ ထီကံစမ်းရန် အချိန်လာမည့် ၂၀၂၀၊ဒီဇင်ဘာ(၁၃)ရက်၊တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅နာရီ ၅၀မိနစ်မှ ညနေ၆နာရီ၁၅မိနစ်အတွင်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ရတနာပုံကိန်း ဆိုက်သည်။လာမည့် ၂၀၂၀၊ဒီဇင်ဘာ(၁၅)ရက်၊အင်္ဂါနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅နာရီ ၅၀မိနစ်မှညနေ၆နာရီ၁၀မိနစ်အတွင်း အင်္ဂါ သားသမီးများ ရတနာပုံကိန်း ဆိုက်သည်။ ထိုတနင်္ဂနွေ၊အင်္ဂါသားသမီးများ မြန်မာ့အောင်ဘာလေ ထီသိန်းတစ်သာင်းခွဲဆု၊သိန်းတစ်သောင်းဆု၊သိန်းငါးထောင်ဆုကြီးများဆွတ်ခူးနိုင်သည်။တနင်္ဂနွေ(သို့)အင်္ဂါ နေ့နံစသည့် မြို့ရွာဒေသများတွင်ထီဆုကြီးများ ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ အဆိုပါ ရတနာပုံတွက်ကိန်းမှာ တစ်နှစ်တာ(၁၂)ကြိမ်တွင်အများဆုံး (၁၀)ကြိမ်၊အနည်းဆုံး(၈)ကြိမ် မှန်ကန်လေ့ရှိသည်။မိမိတို့၏ ထီပေါက်ကံ၊ထီပေါက်မည့်နက္ခတ်များအား မြန်မာနက္ခတ်ဥယျာဉ်တွင် ကျသင့်ငွေံပေးသွင်းပြီးဆန်းစစ်နိုင်သည်။ ဦးဇေယျာကိုမြန်မာနက္ခတ်ဥယျာဉ်၀၉၅၃ ၉၃၃၄၃ ၊၀၉၄၀၀ ၅၀၀၀၀၉ unicode ၂၀၂၀ဒီဇငျဘာလတှငျ တနင်ျဂနှနှေငျ့အင်ျဂါသားသမီးမြား ရတနာပုံကိနျးဆိုကျသဖွငျ့ ထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ။ ထီကံစမျးရနျ အခြိနျလာမညျ့ ၂၀၂၀၊ဒီဇငျဘာ(၁၃)ရကျ၊တနင်ျဂနှနေေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ … Read more